Samachar Batika || News from Nepal » सुस्मिताले नि’धन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घ’टनामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)
सुस्मिताले नि’धन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घ’टनामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । छोरीको नि’धन भएपछि वि’क्षिप्त बनेकी सुस्मिताकी आमा पहिलो पटक हेटौडा पुगेकी छन् । हेटौडा पुगेर प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई भेटेर आए पछि उनको अवस्था थप वि’क्षि’प्त भएको छ । उनी वेहो’स भएर ढलेपछि आफन्तले उनलाई उठाइरहेको देखिन्छ ।
छोरीलाई बेहुली बनाएर पठाएको त्यो हेटौंडामा पाइला राखेपछि मैले आफुलाई सम्हाल्नै सकिन्, उनले भनिन् संधै म हेटौडा गएपछि मेरो नानीलाई घर लिएर आउँथे तर आज रित्तै आउनु पर्यो । वाटो भरी नानीको याद मात्र आयो । उनले आफुलाई प्रहरी र जनप्रतिनिधिले घ’टनाको सत्य तथ्य वाहिर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, मलाई प्रहरी इन्सपेक्टर, मेयर उपमेयरले घ’टनामा दो’षी उम्कन्छ की भन्ने कुरा मनमा कतै पनि नराख्नु होला । हामी दो’षीको एक द’म नदिन पुगेका छौं अ’नुसन्धान जारी भएकाले सबै कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन । अब २ दिनमा सबै कुरा बाहिर आउँछ । उनले आफुलाई प्रहरी प्रशासनले केही दिनमै घ’टनाका बारेमा सबै कुरा बाहिर आउने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गरेको बताएकी छन् ।
प्रहरीले अ’नुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने भएकाले केही दिन लाग्छ भनेर आफुलाई प्रहरीले भनेको बताएकी छन् ।
उनले अब त्यो वाटोमा आफु हेर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन् । उनले केही दिन पनि छोरीलाई कुर्न नसक्ने म आज जिवन भर छोरीलाई कुर्दा पनि देख्न नपाउने भएं उनले रुँदै भनिन् । उनले यो घट’नामा वुवा र छोरी मात्र होइन यो घ’टनामा अरु पनि सहभागी भएको हुनसक्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, त्यो ससुराले म अब वृद्ध भइसके म जेलमा बसेपनि केही हुन्न भनेर अरुलाई जोगाउन सक्छ । मलाई घट’नामा ससुरा र नन्द मात्र संलग्न छन् भन्ने लाग्दैन ।
प्रहरीले घ’टनाको अ’नुसन्धान गर्ने क्रममा सुस्मिताले नि’धन हुनु अघि लेखेको डायरी पनि फेला पारेको छ । उनले नि’धन हुनु अघि डायरी लेख्ने गरेकी थिइन् । सुस्मिताको आमाले घट’नामा सुस्मिताको ससुरा र एउटा नन्द मात्र होइन अर्को छोरी र ज्वाई पनि सहभागी भएको हुनसक्ने दावी गरेकी छन् । प्रहरीले पनि आफुलाई त्यस्तै संकेत गरेको बताएकी छन् । प्रहरीले अ’नुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने भएकाले केही दिन लाग्छ भनेर आफुलाई प्रहरीले भनेको बताएकी छन् ।
प्रकाशित मिति ११ असार २०७७, बिहीबार १०:१०